China sy ny mpanamboatra fonosana ranomandry fonosana | Huanyi
Anaran'ny vokatra: Kitapo ranomandry gel ho an'ny vozony
Size: 22 * 7.5 INCHES
Logo sy fonosana namboarina
taratasy fanamarinana: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI
Ity fonosana gel ity dia miovaova aorian'ny fivaingana, mba hahafahanao mametraka azy ireo manodidina ny lohalika, soroka ary tendanao.
Maninona isika no misafidy fonosana gilasy hanamaivanana ny fanaintainana?
Na manana fanaintainana miverina amin'ny bisikileta ianao, na marary mamontsina amin'ny fandidiana, ampiasao fotsiny ity fonosana ranomandry ity ho an'ny fanaintainan'ny hatoka sy ny soroka.
Rehefa afaka adiny roa tao amin'ny vata fampangatsiahana, nangatsiaka be ny fonosana ranomandry! Raha ny tena izy, mamirifiry be izy io, efa manao plush hiverina amin'ny fonosana ranomandry mahasalama indrindra izahay.
1. 10 taona niainana ny OEM, ODM, namboarina loko, sary famantarana, fonosana. Afaka manome anao soso-kevitra matihanina amin'ny fampiasana sy fitahirizana, hisafidianana vahaolana tsara indrindra ho an'ny vokatrao.
4. Ho an'ireo fonosana ranomandry soroka ireo, ny orinasanay dia manana habe sy endrika samihafa ho an'ny safidinao, afaka mifanaraka amin'ny olona maro.
Previous: Satroka fanafanana gel mafana
Manaraka: fonosana gel mafana sy mangatsiaka
fonosana mangatsiaka ho an'ny hatoka
Famonosana ranomandry hatoka
Kitapo mangatsiaka amin'ny soroka